Miro Cabbiraad ah | January 2020
Ugu Weyn Ee Miro Cabbiraad ah
Miro miraha - qaabab faa'iido leh, kalooriye, sida loo cuno
Qof aan marnaba isku dayin guava, ayaa la yaabi doonaa in la aqbalo bayaankan in miro badani yahay "boqorka midhaha". Aan fiirino aragti dhaw oo aan ogaano waxa miraha guava ah iyo waxyaabaha ay dadku jecel yihiin dhirtaas. Calorie iyo qiimaha nafaqada. Gua waxay u muuqataa mid si aan fiicnayn u muuqata: qaabka miro waxay u egtahay tufaax ama pear, cagaaran ama huruud ah, daboolay tubercles.
Just soddon sano ka hor, miraha kulaylaha waxaa loo tixgeliyaa alaab yar. Kala duwanaanshaha hadda jira ee suuqyada iyo dukaamada ayaa ku farxi doona xitaa macaamilka dalbaday. Si aad u hesho faa'iidada ugu badan ee alaabtan, waxaad u baahan tahay inaad karti u yeelato inaad dooratid oo aad ogaatid sifooyinka gaarka ah ee midhaha kasta. Maqaalkani waxaan eegeynaa miro-tii feijoa ee qulqulka - qiimaha nafaqada, qurxinta iyo cuntooyinka cuntada, iyo sidoo kale cunto karinta.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Miro Cabbiraad ah 2020